ကံအရမ်းကောင်းတဲ့ ရေနံချောင်းမြို့နယ် ဖိုးကိုးရွာက ကိုဖုန်းမြင့်နိုင် - Myitter
November 21, 2019 Myitter နိုင်ငံတကာသတင်း 0
မလေးရှားမှာ ( ၆ လုံး ) ထီပေါက်လို့ ပြန်ပါပြီ….
ကံအရမ်းကောင်းတဲ့ ရေနံချောင်းမြို့နယ် ဖိုးကိုးရွာက ကိုဖုန်းမြင့်နိုင် မလေးရှား ( ၆ ) လုံးထီ ရင်းဂစ် ( ၁ ) ကျပ်ဖိုးမလေးငွေ ( တစ်သိန်း ) ပေါက်လို့ ထုပ်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နှလုံးလှအဖွဲ့မှ ကူညီထုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
မလေးရှားရောက်တာ ( ၆ ) လသာရှိပါသေးသည် ကံအရမ်းကောင်းတဲ့ ရေနံချောင်းက ဖုန်းမြင့်နိုင် ဝမ်းသာအားရဖြင့် မိသားစုထံ မြန်းမာငွေ သိန်း ( ၃၆၀ ) ပိုက်ပြီး ပြန်ပါပြီ….
ကူညီပြီးထုပ်ပေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးလှအဖွဲ့အား ပရဟိတလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လည်း ရင်းဂစ် ( ၃၀၀၀ )မြန်မာငွေ ၁၀ သိန်း ၇ သောင်း ကိုလည်းလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
( 21.11.2019 ) နှလုံးလှ ပရဟိတ လူငယ်များ သွေးလှူရှင်အဖွဲ့ ( မလေးရှား+မြန်မာ )
မလေးရှားမှာ ( ၆ လုံး ) ထီပေါက်လို့ ပြန်ပါပြီ….
ကံအရမ်းကောင်းတဲ့ ရေနံချောင်းမြို့နယ် ဖိုးကိုးရွာက ကိုဖုန်းမြင့်နိုင် မလေးရှား ( ၆ ) လုံးထီ ရင်းဂစ် ( ၁ ) ကျပ်ဖိုး ပေါက်လို့ ထုပ်ရန်အခက်အခဲဖြစ်နေသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နှလုံးလှအဖွဲ့မှ ကူညီထုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။
မလေးရှားရောက်တာ ( ၆ ) လသာရှိပါသေးသည် ကံအရမ်းကောင်းတဲ့ ရေနံချောင်းက ဖုန်းမြင့်နိုင် ဝမ်းသာအားရဖြင့် မိသားစုထံ မြန်းမာငွေ သိန်း ( ၃၆၀ ) ပိုက်ပြီး ပြန်ပါပြီ….
ကူညီပြီးထုပ်ပေးတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှလုံးလှအဖွဲ့အား ပရဟိတလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လည်း ရင်းဂစ် ( ၃၀၀၀ )မြန်မာငွေ ၁၀ သိန်း ၇ သောင်း ကိုလည်းလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
( 21.11.2019 ) နှလုံးလှ ပရဟိတ လူငယ်များ သွေးလှူရှင်အဖွဲ့ ( မလေးရှား+မြန်မာ )
ည ၁၁ နာရီလောက် မှာ ဖုန်းဒိုင်းဆို တဲ့ အသံအကျယ်ကြီး ကြားပြီးတဲ့နောက်…